TRUESTORY: July 2013
တရားသူကြီးချုပ်၊ ရှေ့နေချုပ်ခန့်အပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဦးရဲထွဋ် ဘာပြောလဲ
သမ္မတ၏ ပြောခွင့်ရ၊ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ကသူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ တင်ပြ လာတဲ့တရားသူကြီးချုပ်နဲ့ ရှေ့နေချုပ်ခန့်အပ်မှု ဆိုင်ရာ ရေးသားတင်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ရားသူကြီးချုပ်နဲ့ ရှေ့နေချုပ်ကိုသမ္မတကတိုက် ရိုက် ခန့်အပ်တာ ဖြစ်လို့ တရားရေးမဏ္ဍိုင်က အုပ်ချုပ် ရေးမဏ္ဍိုင်အောက်မှာရောက်နေတယ် လို့ ပြောဆို ကြောင်း ရေး သားဖော်ပြနေ တာ ကို တွေ့ရ ပါ တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားတဲ့စကားအတိအကျကို ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ သို့သော် မီဒီယာ များ မှာ ရေးသားဖော်ပြ နေတဲ့ တရားသူကြီးချုပ်နဲ့ ရှေ့နေချုပ်ကို သမ္မတက တိုက်ရိုက် ခန့်အပ်
Posted by Gentle Men at 1:27 PM No comments:
အပျိုစင်ဘ၀ကို ရောင်းချခဲ့သော်လည်းဘရာဇီးမိန်းကလေး အပျိုစင်ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နေသေး
အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် အပျိုစင် ဘ၀ ကို ရောင်း ချခဲ့သည့် ၂၁ နှစ်အရွယ် ဘရာဇီး မိန်းကလေး သည် ယခု အချိန်အထိ အပျိုစင် ဘ၀ကို ပိုင် ဆိုင်လျက် ရှိနေသေးကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့သည်။ ကတ်ထရီနာ မင်လီယို ရေနီသည် ၎င်း၏ အပျိုစင်ဘ၀ကို အွန်လိုင်းတွင် လေ လံတင် ရောင်းချခဲ့ရာ ၅၃ နှစ် အရွယ်ရှိ ဂျပန် လူမျိုး သန်းကြွယ် သူဌေး နတ်စုက ဒေါ်လာ ၇၈၀,၀၀၀ ဖြင့် ၀ယ်ယူခဲ့သည်။ ကတ်ထရီနာ သည် နတ်စုခေါ် ဂျက်စတင်ဆစ်ဆေးထံမှ စရံငွေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိခဲ့ပြီးသြစတြေးလျ နိုင်ငံဆစ်
Posted by Gentle Men at 1:12 PM No comments:
အားကစားသမား ကိုကြည်လင်း ကို
Goal 50:Singapore Chief Editor -'s
Top 20 South East Asian Player
မှာတခြားနိုင်ငံက ဘောလုံးကစားသမားတွေနဲ့ယှဉ်ပြီး Vote လုပ်ရွေးချယ် ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမှ ကိုကြည်လင်း အနိုင်ရရှိအောင် ကြိုးစားပေးလိုက်ကြရအောင်နော်။ မြန်မာနိုင်ရမည်။
Posted by Gentle Men at 1:06 PM No comments:
ရှေ့တစ်စီးကျော်က ကားက စကိုင်းနက်က သတင်းလိုက်ယူတဲ့ကား
Posted by Gentle Men at 1:03 PM No comments:
Pre 27 th SEA Games, Test match for chess competition will be held at Zabu Thiri Hotel, Nay Pyi Taw, Myanmar from 31st July 2013 to 8th August 2013. Eight Participating Countries: Thailand, Vietnam, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Philippine and Myanmar will complete in the match.
Posted by Gentle Men at 10:32 AM No comments:
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတခွင်မှာ ၃ ရက်ကြာ စစ်ဆင်ရေးအရ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် အသုံးချခံနေ ရတဲ့ အရွယ်မရောက်သေးသူ ၁၀၅ ယောက်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ FBI ပြည်ထောင်စု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျုရိုက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတ၀ှမ်း စစ်ဆင်ရေးမှာ အရွယ် မရောက်သေး သူတွေကို ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးချနေသူတွေနဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ်နေသူ ၁၅၀ ကို ဖမ်း
Posted by Gentle Men at 9:29 AM No comments:
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကုန်းတွင်းနှင့် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်များမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေသန်းပေါင်း ၅၆၂၆၆၅ ထုတ်လုပ်သွားမည်
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကုန်းတွင်းနှင့် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်များမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေ သန်းပေါင်း ၅၆၂၆၆၅ ထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။
ရေနံစိမ်းနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ပြည်တွင်းသုံးစွဲမှု ဖူလုံရေး၊ ပြည်ပသို့ တိုးတက် တင်ပို့နိုင်မှုအတွက် တိုးချဲ့ရှာဖွေ ထုတ်လုပ်ရန် ရည်မှန်းထားပြီး ရေနံစိမ်းနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်မှုကို ယခင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် တိုးတက်ထုတ်လုပ်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားခြင်းမှာ မကွေးတိုင်းဒေသ ကြီး တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်မှုများ တိုးတက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းခြင်း၊ ရခိုင်ပြည် နယ်ကမ်းလွန်ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေမှစတင်ထွက်ရှိခြင်း၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဇောတိက သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေမှ
၄၉ လမ်းထောင့် တိုက်ခေါင်မိုးထပ်က ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း ရဲဝင်ဖမ်းလိုက်ပြီ
ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်တစ်ထောင် မြို့နယ် မဟာဗန္ဓုလမ်းနှင့် ၄၉ လမ်းထောင့်ရှိ တိုက်ခေါင်မိုး ထပ်မှ ပြည့်တန် ဆာလုပ် ငန်းကို ဇူလိုင် ၂၈ ရက် ညနေက ရဲများ ၀င်ဖမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
ရဲများက ထိုတိုက်ခန်းတွင် အနှိပ်ခန်းအမည်ခံကာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြောင်း သ တင်း ရ ရှိသဖြင့် ၀င်ရောက်ဖမ်း ဆီးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း ရဲဌာနကဆိုသည်။
ထိုတိုက်ခန်းတွင် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ရောက်ရှိနေသည့် အမျိုးသမီး ၁၃ ဦးကိုလည်း
Posted by Gentle Men at 9:16 AM No comments:
အတွက် စဉ်းစား၏။ အတွေ့အကြုံရှိသည့်
ဝါရင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တို့သည် နောင်မျိုးဆက်အတွက် စဉ်းစားသည်။
A politician thinks of the next election;astatesman thinks of the next generation. (James
Freeman Clarke, Sermon)
Posted by Gentle Men at 9:11 AM No comments:
ပြည်သူများ၏ ပေးစာများအား အရေးယူ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြည်သူများ သိရှိစေရန် သမ္မတရုံးမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း မော်တော်
ယာဉ်များ ကုန်ပစ္စည်း သယ်ဆောင်သွားလာရာတွင် မလိုအပ်ဘဲ အခွန်များကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပေးဆောင် နေရခြင်း၊ လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်မှ
Posted by Gentle Men at 8:58 AM No comments:
သမ္မတခရီးစဉ်၏ ရလာဒ်တစ်ခုကြောင့် ဗြိတိန်-မြန်မာ ပူးတွဲစစ်ရေး လေ့ကျင့်မှု သြဂုတ်လတွင် စမည်
နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရအရာရှိများ၏ သဘောတူညီ
ချက်များအရ ဗြိတိန်-မြန်မာ တပ်မတော်များ ပူးတွဲလေ့ကျင့်ရေးကို လာမည့် သြဂုတ် လ အတွင်း စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံရုံးမှ နိုင်ငံရေးဌာန ဒုတိယ အတွင်းဝန် Mr.Joseph Fisher က ပြောကြား သည်။ ဗြိတိန်အစိုးရ၏ အဆိုပါ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှု များသည် မြန်မာ့တပ်မတော်က တာဝန် သိသော၊ တာဝန်ယူနိုင်သော တပ်မတော် ဖြစ် လာစေရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် အတွက် ရည်ရွယ်ကြောင်း
Posted by Gentle Men at 8:49 AM No comments:
ဆီမီးဝီး သရီးကို ဇူလိုင် ၃၀ ရက်နေ့မှာ
ဦးစိုးမြင့်ထံကသိရပါတယ်။မြန်မာ့ဆက် သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာဆက်ကြောင်းတွေနဲ့အဓိကချိတ် ဆက်ထားတဲ့ပင်လယ်ရေအောက် ဖိုင်ဘာကေဘယ်လ်ဆီမီးဝီးသရီးဆက်ကြောင်းက ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်ညနေ ၅နာရီအချိန်မှာ ချို့ယွင်း မှုဖြစ် ခဲ့တယ်။ ပြုပြင်ဆဲကာလအတွင်း မြန်နှုန်း 5.5 GBPS ကိုပဲအသုံးပြုလို့ရခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာ ယခင်မြန်နှုန်း 11.5GBPS ကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ Best Western International ဟိုတယ် လုပ်ငန်းအုပ်စုက၂၀၁၄ခုနှစ် နှစ် လယ်တွင် နေပြည်တော်၌ ဟိုတယ် သစ်တစ်လုံး ဖွင့် မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီထံမှ သိရသည်။ယင်း ဟိုတယ်တွင် အခန်းပေါင်း ၂၅၀ ပါ ဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ကြယ်ငါး ပွင့်ဟိုတယ် အဖြစ်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်
ကြောင်း နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများ တွင် ဖော်ပြကြသည်။
"နေပြည်တော်မှာ အဆင့်မြင့်ပွဲတွေ ကျင်းပကြတယ်။ နောက်ပြီး SEA Games လို အားကစားပြိုင်ပွဲ မျိုးတွေ ကျင်းပ ကြမယ်" ဟု ဟိုတယ် လာရောက်ဖွင့်လှစ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ Best Western
Posted by Gentle Men at 8:36 AM No comments:
နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ နှစ်ဖက်စလုံးကို အကာကွယ်ပေးဖို့ အာမခံပေးရင်းဖြင့် လူဆင်းရဲတို့ ထံမှ မဲရယူခြင်းနှင့်
လူချမ်းသာများထံမှ ကမ်းပိန်းအတွက် ထောက်ပံ့ကြေးရ
ယူခြင်း ဆိုသည့် နူးညံ့သိမ်မေ့ွေ သာ အနုပညာ
Posted by Gentle Men at 8:33 AM No comments:
သူတို့ရေးထားတာတွေက မှန်ချင်မှမှန်လိမ့်မည်။ တုန့်ပြန်ရေးသားဖြေရှင်းထားခြင်း မရှိသည့် အတွက်အမှားကြာလျှင် အမှန်ဖြစ် သွားမည်။
တဖက်သက် ဘက်လိုက် ရေးသား ပြော ဆိုမှုများကို မတုန့်ပြန်ခြင်း (သို့)
လစ်လျူရှုခြင်း (သို့) ကြားနေခြင်းသည် တဖက်သက်ဘက်လိုက် ပြောဆိုရေး သားမှုကိုအားပေး ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်နှင့် မဆိုင်သေး.. ဟု ထင်ကာ ပါးစပ် ပိတ် မနေပါနှင့်။
ဖတ်ပါ။ ပြောပါ။ ထောက်ပြပါ၊ ဆွေးနွေးပါ။ ရေးသားပါ။
4. ကိုယ်န့မဲ ဆိုင် ဟု သဘောထားပါ..
ကိုယ့် အလှည့် ရောက်လျှင်လည်း မည်သူမှ ဆိုင်မည် မဟုတ်ပေ။..။
Posted by Gentle Men at 8:20 AM No comments:
ကမ္ဘာ့အဆင့် သချာင်္ပြိုင်ပွဲ SASMO တွင် ရွှေတံဆိပ်ရကျောင်းသားများAsia International Mathematical Olympiad Contest 2013 တွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ထွက်ခွာ
ကမ္ဘာ့အဆင့် သချာင်္ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သော SASMO တွင်ရွှေတံဆိပ်ရရှိသောကျောင်း သား များသည် National Taiwan University တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သောAsia International Mathematical Olympiad Contest 2013 တွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက်နှင့် နိုင်ငံတကာ
သချာင်္ထူးချွန်သော လူငယ်များ၏ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် ဇူလိုင်၂၆၇က်တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှထွက်ခွာ သွားကြောင်းသိရသည်။
ထိုပွဲတက်ရောက်နိုင်ရန် ရွေးချယ်ခံရသော ရွေတံဆိပ်ဆုရှင်ကျောင်းသားများမှာမောင်ဇာနည်မင်းနိုင်
SKYNET ရုပ်သံမှ Package (၄) မျိုးခွဲပြီး ရောင်းချတော့မည်
ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီရဲ့ စကိုင်းနက် အခပေး ဂြိုလ်တု ရုပ်သံလွှင့်ဌာနဟာ စတင်ဝန်ဆောင်မှုပေးစဉ်ကစ ထုတ်လွှင့်သမျှ ချယ်နယ်အားလုံးကို တစ်လ ကျပ် ၁သောင်း၊ တစ်နှစ် ကျပ် ၁ သိန်း ၂ သောင်းဝန်း ကျင်နှုန်းနဲ့ငွေကြေးကောက်ခံလျက် ရှိရာကနေ အခု သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး Package (၄) မျိုးခွဲပြီး ရောင်းချတော့မယ်လို့ ကြေငြာလာပါ
SN-1, Package မှာ ရုပ်သံလိုင်း ၂၀၊ တစ်လ ကျပ် ၃၆၀၀၊ တစ်နှစ် ၄၃၂၀၀ ကျပ်၊ SN-2, Package မှာ ရုပ်သံလိုင်း ၇၀ကျော်၊ တစ်လ ကျပ် ၁၂၀၀၀၊ တစ်နှစ် ၁၄၄၀၀၀ ကျပ်၊ SN-3, Package မှာ ရုပ်သံလိုင်း ၉၀ ၀န်းကျင်၊ တစ်လ ကျပ် ၁၆၀၀၀၊ တစ်နှစ် ၁၉၂၀၀၀ ကျပ်၊ HD Package အတွက် တစ်လ ကျပ် ၂ သောင်း၊ တစ်နှစ် ကျပ် ၂၄၀၀၀၀၊ နဲ့ အခြား ရိုးရိုးလိုင်းတွေ ကိုပါ ယူရင် ထပ်ဆောင်းငွေ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Gentle Men at 9:05 AM No comments:
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး အယောင်ဆောင်ပြီး ငွေကျပ် ၅၁ သိန်း လိမ်လည်
သူ့ကိုယ်သူ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဟု မိတ်ဆက်ပြီး ဖုန်းဆက်ကာငွေကျပ် ၅၁သိန်း လိမ်လည်ရယူ သွားခဲ့မှုကို ဒေါပုံရဲစခန်းတွင် ဇူလိုင် ၂၄ ရက်က အမှုဖွင့်တိုင်တန်းထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ မှုခင်းသတင်းထုတ်ပြန်သည်။
လိမ်လည်ခံရသူမှာ မန္တလေးတိုင်း၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ တောင်သာမြို့နယ်မှ ကျေးရွာတစ်ခုတွင် နေထိုင်သော မနုနုဆွေဖြစ်ကြောင်း ရဲဌာနက အတည်ပြုထားသည်။
သူမကို အမျိုးသားတစ်ဦးကဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်လာပြီး သူ့ကိုယ်သူဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဟု မိတ်ဆက် ကာ တယ်လီဖုန်း သုံးစွဲသူ များကို အစိုးရက ကျေးဇူးတုန့်ပြန်သောအနေဖြင့် ၎င်းတို့ဝန်ကြီးဌာနက ချထားပေးခဲ့သည့် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများထဲမှ သုံးလုံးကို မဲဖောက်ကာသိန်း ၂၀၀၀ ချီးမြှင့်ရန် စီစဉ်ခဲ့ရာ ယခုဖုန်းသည် မဲပေါက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ရဲဌာနကို တိုင်တန်း ရာတွင်
Posted by Gentle Men at 9:02 AM No comments:
မြ၀တီမြို့အတွင်း ရေကြီးရေလျံမှု ဖြစ်ပေါ်နေ
ရေ မြင့်တက်ကာ သုံးနှစ်အတွင်း အဆိုးရွား ဆုံး ရေကြီးရေလျှံမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး လူသောင်းနှင့် ချီ၍ ရေဘေးသင့်နေကြောင်း သိရသည်။
ဇူလိုင် ၂၈ ရက် ညမှစ၍ မြ၀တီမြို့ရှိ ရပ်ကွက် အား လုံး၏ အနိမ့်ပိုင်း နေရာများ ရေနစ်မြုပ် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မြ၀တီမြို့တွင်း ရပ်ကွက်တချို့ သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ရေလွှမ်း မိုး မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာယခုနှစ်သည် သောင်ရင်းမြစ် ရေတက်မှု အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင် လမ်းပေါ် ရှိ အထက်တန်း ကျောင်းကြီးနှင့် အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်ရှိ အ-ထ-က(၂) အပါ
Posted by Gentle Men at 8:53 AM No comments:
Sexy ဓာတ်ပုံတွေကြီးပဲရိုက်လေ့ရှိတဲ့ ဇွန်သင်းဇာ ရဲ့ Sexy ဓာတ်ပုံတွေ
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော်(၂၀၁၃)သို့နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ဗီဒီယိုမိန့် ခွန်း
ယနေ့ဇူလိုင်လ၂၇ရက်၊ညနေ၆နာရီခွဲက သုဝဏ္ဏ မိုးလုံလေးလုံ အားကစားကွင်းတွင် ကျင်းပပြု လုပ်သော မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော်၂၀၁၃ ဖျော်ဖြေပွဲသို့ ဗီဒီယိုမိန့် ခွန်းတစ်ခု ပို့ခဲ့သသည်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏မိန့်ခွန်းမှာ..
၁။နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်။ လူငယ်များ အ တွက်ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့အနာဂါတ်ဖန်တီးပေး လို။
၂။ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ငြိမ်းချမ်းရေးသည်အမှန်တကယ်လိုအပ်တိုင်းရင်းသားများနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး
Posted by Gentle Men at 8:26 AM No comments:
ဇူလိုင် ၃၁ ရက် ခန့်တွင် အင်တာနက် လိုင်းများပြန်လည် ကောင်းမွန်နိုင်
ပြီးJoint အဆက်ကို ပြန်လည် ဆက် သွယ်ပြီးပါကဇူလိုင်၃၁ရက်ခန့်တွင်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အင် တာနက်
လိုင်းများပြန်လည် ကောင်း မွန်နိုင်
ယခုလက်ရှိ ငွေကျပ် ၁၅၀၀ တန်မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ မှာယခင်မိုဘိုင်းဖုန်းတွေလို Ringtune များထည့် သွင်းနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့က Sakura Towerမှာကျင်းပတဲ့ ငွေကျပ်တစ်ထောင့် ငါးရာ တန် မိုဘိုင်းဖုန်းများ Ringtune စတင် အသုံးပြုနိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်တဲ့အခမ်း အနားမှ သိရပါတယ်။ ငွေကျပ် တစ်ထောင့်ငါး ရာ တန် မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် Hello Music ၀န်ဆောင်မှုကိုMIS(Myanmar Telecommunication & Technology Services) ကုမ္ပဏီမှ စီစဉ် ပြုလုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်လိုသူတွေအနေနဲ့ ငွေကျပ် တစ်ထောင့် ငါးရာ တန်မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့
ပရိသတ်ရင်ထဲလည်း မရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင် မရိုက်ချင်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် နဝရတ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံကြီးများတွင် ရုံတင်ပြသတော့မည့် တိမ်မင်းသမီးရဲ့ဒဏ္ဍာရီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား နှင့်အတူ ပရိသတ်များနှင့် တစ်ကျော့ပြန်ပြန်လည်ထိတွေ့ဖို့ ကြိုးစားလာသော သရုပ်ဆောင် နဝရတ်နှင့် တွေ့ဆုံပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအကြောင်း၊ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှု များ ကို ၂ နှစ်နီးပါးကြာ ရပ်နားထားရသည့် အကြောင်း အရင်းနှင့်မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ရိုက်ကူးမည့် မဟာဆန် တဲ့ မာယာမျက်နှာဖုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများအကြောင်း ကို The Voice က မေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Voice : တိမ်မင်းသမီးရဲ့ဒဏ္ဍာရီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးဖြစ်သွားပုံကနေ စပြောပေးပါဦး။
NWR : ဒီရုပ်ရှင်ကား ရိုက်ဖြစ်သွားပုံက နဝရတ်က ဒါရိုက်တာနေပိုင်နဲ့ မြခွာညို အိမ်ရာမှာ ဇာတ်ကား ရိုက်နေတုန်း ဈေးထဲက မိန်းမတစ်ယောက်က ကလေးလေးချီပြီးတော့ ရောက်လာပြီး တိမ်မင်းသ
မန္တလေးမြို့ရှိ ရတနာပုံခေတ်နှောင်းပိုင်းလက်ရာ သီပေါမင်း၏ကောင်းမှုတော် ရွှေနန်းတော်ကျောင်းအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ် လာရောက်လေ့လာ
မန္တလေးမြို့ရှိ ရတနာပုံခေတ် နှောင်းပိုင်း လက် ရာသီပေါမင်း၏ ကောင်းမှုတော် ရွှေနန်းတော်
ကျောင်းအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ်သည် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက် နံနက် ပိုင်း က လာရောက် လေ့လာခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။အဆိုပါ ရွှေကျောင်းတော်အား မူလလက် ရာမပျက် ပြန်လည် ပြုပြင်ရန်အတွက် အမေရိ ကန်နိုင်ငံမှ Ambassadors Fund for the Cultural Preservation က ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကို နှစ်နှစ်ခန့် အချိန်ယူ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ''အမေရိကန်အစိုးရကယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရွှေကျောင်းတော်ကြီး ရေရှည်တည်
Posted by Gentle Men at 2:03 PM No comments:
ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်တွင် စံချိန်တင်ကျ ဆင်း လျက်ရှိသော အခေါက်ရွှေဈေးနှုန်းသည် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး မြင့်တက်လာမှု ကြောင့် တကျပ် သား ကျပ် ၇ သိန်းဝန်းကျင်အထိ ပြန်လည်မြင့် တက် လာပြီး အရောင်းအ၀ယ်မှာမူ အလွန် နည်း ပါး လျှက်ရှိကြောင်း ဈေးကွက်အတွင်းမှ စုံစမ်း သိရှိ ရသည်။
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနှုန်းသည် မေလအတွင်းက ရွှေ
တအောင်စလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၀၀ အထိ စံချိန်တင်ထိုးကျခဲ့ပြီး မြန်မာ့ ရွှေဈေးမှာလည်း အခေါက်ရွှေ တကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၆၆၀၀၀၀ ၀န်းကျင် အထိထိုးကျခဲ့ကြောင်း၊ ယခု ဇူလိုင်လ နှောင်းပိုင်းတွင်မူ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးသည်
Posted by Gentle Men at 1:50 PM No comments:
ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် ၂၀၀၈ မှာစ တင် တည်ဆောက်ပြီး မေလ၂၀၀၉ခုနှစ် မှာစတင် ဖွင့်လှစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ ပထမ ဆုံးဆိုလာစနစ်သုံးအားကစားကွင်း
ကြီးပါ။ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ Kaohsiungမှာ တည်ရှိပြီး စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာပဲ ကမ္ဘာ့အားကစား ပွဲတော် ကို လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်၊ကွင်း တစ်ကွင်းလုံးရဲ့ပွဲကြည့်စင်အမိုးတွေ အားလုံးကိုဆိုလာပြားတွေနဲ့တည်
ဆောက် ထားပါတယ်။ကွင်းတစ် ကွင်းလုံးရဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တွေ
အား လုံး ကိုလည်း အဆိုပါ ဆိုလာြး ပား ကနေပဲအသုံးပြုပါတယ်၊ကွင်းရဲ့  ပရိတ်သတ် ဝင်ဆံ့ဦးရေ ကတော့ ၅၅၀၀၀ ဖြစ်ပါတယ်၊
ထိုင်ဝမ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ အဆိုပါအားကစားကွင်းကို Dragon Stadium Taiwan လို့အမည်ပေး
Posted by Gentle Men at 11:52 AM No comments:
“နှင်းဆီခရီးသွား မှတ်တမ်းများ” အစီအစဉ်ကို မြဝတီဒစ်ဂျစ်တယ်လိုင်းမှာ ကြည့်ရှုနိုင်
နှင်းဆီအငြိမ့်အဖွဲ့သားများ၏ နိုင် ငံခြား ဖျော်ဖြေမှုခရီးစဉ်တစ်ခု ဖြစ်
သည့် ဥရောပ ဖျော်ဖြေရေး ခရီးစဉ် ၏ အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ ပါဝင်သည့် “နှင်းဆီခရီးသွားမှတ်တမ်းများ” အစီအစဉ်ကို မြဝတီရုပ်မြင်သံကြား တွင် ဇူလိုင်လ ၂၃ရက်နေ့က စတင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးပရိသတ်အားပေး
မှုနှင့် တောင်းဆိုမှုများ ရှိသည့်အတွက် မြဝတီဒစ်ဂျစ်တယ် ရုပ်သံလိုင်းသစ်တွင်လည်း ထပ်မံထုတ် လွှင့်သွားမည်ဟု ယင်းအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်သည့် ADMA Mediaမှ သိရသည်ဟု Daily Eleven
Posted by Gentle Men at 11:28 AM No comments:
မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အ တွက် တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့်လည်း ဖြေ ရှင်းပေးစေလိုဟု တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်၊ ဗဟို စစ်ကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌGeneralFanChanglong နှင့်
တွေ့ဆုံစဉ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြောကြားလိုက်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် General Fan Changlong တို့သည် ဇူလိုင် ၂၃ ရက်နံနက်က နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင် ၂၄ ရက်ထုတ် အစိုးရ သတင်း စာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်တွင်အဖွဲ့အစည်းအချို့သည် မူး ယစ်ဆေး ၀ါး လုပ်ကိုင်သည့် အထောက်အထား များ တွေ့ရှိနေရကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးကို အမျိုးသားရေး တာဝန် တစ်ရပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာသည် တရုတ်နိုင်ငံ
ရက်လွန် ၁၅၀၀တန် Sim Card များသက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနိုင်
တန်ဖိုးနည်း ၁၅ဝဝ တန် Sim Card များ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရက်လွန်ပါက သက်တမ်း တိုး လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားပါက စာချုပ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူတစ်စောင်၊ (အကယ်၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဌာနတို့မှ စာချုပ်ထုတ်ပေးထားခြင်း မရှိပါက စာချုပ်ထုတ်မပေး ရသေးကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဌာနတို့မှ ထောက်ခံချက် ပါရှိရမည်)
သက်တမ်း လွန်ရခြင်းအတွက် ထောက်ခံချက် (ကတ်ထုတ်ပေးသည့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဌာန၏ ထောက်ခံချက်)၊ ပိုင်ရှင်၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မိတ္တူတစ်စောင် စသည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး မန်နေဂျာထံ လိပ်မူ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၅ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြ ထားပါသည်။
Posted by Gentle Men at 8:01 AM No comments:
နောက်ကြောင်းပြန် လှည့်ရန်နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်နေသူများ
မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လိုမှု များ ဟာ အလွန်အရှိန်အဟုန် မြန်ဆန်
ဆောင်ရွက်ပေးရသူများ အနေနဲ့လိုက် လို့မမီနိုင်ဖြစ် နေရပါတယ်။ ပွင်းလင်း ၍ ထင်သာမြင်သာ ရှိသော လွတ်လပ် စွာရေးသားပြောဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်နို
င်ေ သာ ကာလကြီးမှာ အရေးကိစ္စများ ဟာလည်း တစ်ခု မပြီးခင် နောက် တစ် ခု က ပေါ်ပေါက်လာနေတာ ဆက် တိုက်ဆိုသလိုပါပဲ။ ယခုတစ်လော လယ် ယာမြေသိမ်းဆည်းခံရမှု
ပြန်ပေးရေးတောင်းဆိုမှုတွေ၊ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတွေက ထိပ်တန်းရောက်နေ ပါတယ်။ ယခင်အစိုးရလက်ထက်က အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဖွဲ့အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခွင့်အရေး ရလာတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်တင်မဟုတ်တော့ဘူး၊အရင့်အရင်က မြေတွေပါ တိုင် ကြတောင်း
Posted by Gentle Men at 7:53 AM No comments:
တွေ နည်းပါးကြောင်း ဂျော့ ရှစ်ကောဗ့်စကီ က ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာ အိမ်ဝယ်သူတွေ ဟာ လန်ဒန် မြို့လယ် က ရှေးဟောင်း အဆောက် အအုံ၊
Posted by Gentle Men at 7:43 AM No comments:
Posted by Gentle Men at 1:24 PM No comments:
အသားပုပ်နံ့ထွက်သည့် အင်ဒိုနီးရှားမှ ထူးဆန်းသော ပန်းတစ်မျိုး ၀ါရှင်တန်၌ ပွင့်နေ
ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်က ၀ါရှင်တန် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်အတွင်း မသာပန်းပွင့်နေသည်ကို ကြည့်ရှုနေကြစဉ် (Photo:AFP)
အင်ဒိုနီးရှား အမြဲစိမ်းတောများအတွင်း ပေါက်ရောက်လေ့ ရှိသော အသားပုပ်နံ့ထွက်သည့်"မသာပန်း"ဟု ခေါ်ကြ သော ပန်းတစ်မျိုးသည်ဇူလိုင်၂၂ရက်တွင် ၀ါရှင်တန်မြို့ရှိ ရုက္ခဗေ ဒ ဥယျာဉ်အတွင်း ပွင့်လာရာ ယင်းကကမ္ဘာလှည့်ခရီး သည်ပေါင်း များစွာကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Plant ဟုခေါ်သော အမျိုးအစားတွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဖြစ် သည့် Titan arum ဟုခေါ်သော ပန်းပွင့်သည် နောက်ထပ် ၂၄ နာရီမှ ၄၈ နာရီ ကြာသည်အထိ ပွင့်ချပ်များ ဆက်လက် ပွင့်နေဦးမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်ဟု ဆိုသည်။ အပင်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ကျမ်းပြုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဘီလ် မက် လပ်ဖလင်းက ဇူလိုင် ၂၂ ရက် ညနေ ၆ နာရီခန့်တွင် အဆိုပါပန်းပွင့်မှ ထွက်ပေါ်လာသည့် အပုပ်နံ့ကိုစတင်သတိပြုမိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။သူကယင်းအနံ့ကိုရရှိပြီးနောက် အော်ဂ
ကျေးရွာပေါင်း ခြောက်သောင်းကို ကျပ်ဘီလီယံ သုံးရာခန့် ငွေထုတ်ချေးရန် စီစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ ကျေးရွာပေါင်း ခြောက်သောင်းခန့်တွင် နေထိုင်သော မိသားစုများကို တစ်အိမ်ထောင်စုလျှင် တစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် ကျပ်ငွေ ဘီလီယံသုံးရာခန့် ချေးသွားရန် သမ၀ါယမ ၀န်ကြီး ဌာနက စီစဉ်နေကြောင်း ၀န်ကြီးဌာန၏ သ တင်း နှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်အောင်က မဇ္ဈိမသတင်းစာကို ပြောသည်။
ကျေးရွာတစ်ရွာကို မိသားစုတစ်ရာသတ်မှတ်ထားရာ ချေးငွေထုတ်ချေးရန် ၀န်ကြီးဌာန အနေနှင့် လေ့ လာမှု များပြု လုပ်နေ ပြီး မည်သည့်အချိန်တွင် စချေးမည်ကို အတိမကျ မသတ်မှတ် ရသေးကြောင်း ဆက်ပြောသည်။
ချေးငွေကို သမ၀ါယမအသင်း ၀င်ထားသူများကို ထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းချေးငွေရယူလိုပါက အသင်း ၀င်ထားရန်
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသတွင် မိုးခေါင် ရေရှားမှုကြောင့် လူပေါင်း ၃၄,ဝဝဝ ခန့် သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်
တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဒေသရှိဟူနန်ပြည်နယ်တွင်ဇူလိုင် လအစောပိုင်းမှစတင်၍ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မိုးခေါင် မှုကြောင့် လူပေါင်း ၃၈၄,ဝဝဝ ခန့် သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိကြောင်း ဟူ နန်ပြည် နယ် မိုးခေါင် ရေ ရှား မှု ပြန်လည် ကယ်ဆယ်ရေး ဌာနက ဇူလိုင် ၂၃ ရက် တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဟူနန်ပြည်ရှိ မြို့ကြီး ၁၂ မြို့မှ တိုက်နယ် ၈၇ ခုသည် မိုးခေါင်မှုဒဏ်ကြောင့် ကောက်ပဲသီးနှံ စိုက်ခင်း ၂၆ဝ,ဝဝဝ ဟက်တာခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး မွေးမြူရေး တိရစ္ဆာန် ၂၁၆,ဝဝဝ ခန့် သောက် သုံးရေ ပြတ်လပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ဟူနန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြစ်ပေါင်း၁၂၈စင်းနှင့် ရေလှောင် ကန် ၁၂၄ ခုတွင် ရေခန်းခြောက်လျက် ရှိကြောင်း၊
Posted by Gentle Men at 8:59 AM No comments:
အလုပ်သမားဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေအပြင် အလုပ်သမားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေအကြောင်းရေးသားမယ့်အလုပ်သမားလက်စွဲစာစောင်ကို
ပြည်ထောင် စု လွှတ်တော်က မကြာမီထုတ်ဝေဖို့ရှိတယ်လို့ RFA ကသိရပါ တယ်။
ဖြန့်ချိတော့မှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပည်သူ့ လွှတ်တော် နှစ် ရပ်ပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အလုပ်သမား၊ အလုပ် ရှင်အခွင့်အရေး ပူးပေါင်းေ လ့ လာရေးကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့အလုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရည် က ပြော
Posted by Gentle Men at 8:56 AM No comments:
လက်ရှိ မြန်မာ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု အနေ ထားသည် အနာဂါတ် နိုင်ငံရေး တိုးတက် ဖြစ် ထွန်းမှု အတွက် အားကောင်းသည့် အလားအ လာတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ပြီးခဲ့ တဲ့ဇူလိုင်လ(၂၃)ရက်နေ့ရက်စွဲနှင့်၎င်း၏
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမှတဆင့် ကြေငြာချက် တစ် ရပ်ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။
“ဦးသိန်းစိန် အစိုးရမှ ဖော်ဆောင် နေသည့် အသွင် ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် များသည် အစိုးရမှ
သတ္တိရှိတဲ့ မိခင်လောင်း တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဗိုက်ထဲမှာငါးမွှာပူးသားလောင်းလေး
တွေ လွယ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမက ဒီငါးမွှာပူးလေးကို အကူကိရိယာ သုံးတာမျိုး ၊ ခွဲစိတ်တာမျိုး မသုံးဘဲ သဘာဝ နည်းနဲ့မွေးဖို့လုပ်ထားပါတယ်။ အမှန်တော့ ဒီလို အမွှာများ ရင် ခွဲစိတ်မွေးသင့်တာ ဖြစ်ပြီး အသက်အန္တရယ် လည်း စိုးရိမ်ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်းမှာတော့ ဆရာဝန်များဟာသူမဗိုက် ကို ကြည့်ပြီး အမွာပူးလေးမွေးမယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ တွက်ကိန်းမှား သွားပါတယ်။ တစ်နေ့ တစ်ခြား ကြီးထွားလာတဲ့ သူမ ဗိုက်ထဲမှာ တကယ်ရှိတာက ငါးမွှာပူးလေး ပါတဲ့။သူမ အတွက် ရှောရှာရှူရှူလေး ကလေးလေးတွေ မွေးနိုင်အောင် ဆုလေးတောင်းပေးလိုက် ရအောင်နော် ။
Posted by Gentle Men at 5:38 PM No comments:
Posted by Gentle Men at 5:31 PM2comments:
ရန်ကုန်မြို့ ၌ အဆင့်မြင့်ဘတ်စ်ကား ပြေးဆွဲသည့် BRT စနစ်နှင့် ဘတ်စ်ကားသီးသန့် လမ်းကြောင်း စနစ်အား ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလ၌ စတင်မည်
ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်း ခရီးသည် တင် ဘတ်စ်ကားများအား အ ဆင့်ြ မင့်ပြေး ဆွဲသည့် BRT (Bus Rapid
Transit) စနစ်ကို ယခုနှစ်၊ အောက် တိုဘာလအတွင်းအကောင်အထည်
ဖော်နိုင်ရန် လျာထားစီစဉ်လျက် ရှိပြီး အလားတူ ဘတ်စ်ကားသီးသန့် ပြေးဆွဲသည့် လမ်းကြောင်းကိုပါ စ တင်အကောင် အထည်ဖော် နိုင် ရန်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ‘ရန် ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ
ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်း ကြုံတွေ့နေရသည့် ယာဉ်လမ်းကြောင်း ကျပ်တည်း မှုနှင့် ခရီး သွားပြည်သူများ အချိန်ကြန့်ကြာ
ယခုနှစ်ကုန်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (နိုင်/ ကျဉ်း) များ တယောက်မ ကျန် ပြန် လွှတ်ပေးမည်ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ၎င်း၏ ဥရောပ ခရီးစဉ်အ တွင်း ကတိပေးပြောဆိုခဲ့ သကဲ့သို့ ကချင်ြ ပည်နယ် ဒုက္ခသည်စခန်းမှ အဖမ်းခံ ခဲ့ရသည့် ဦးဘရန်ရှောင် အပါအဝင် ရှမ်းလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ၊ နိုင်/ ကျဉ်းများကိုယနေ့တွင်စတင် ပြန်လွှတ် ပေးခဲ့ သည်။ကချင်ပြည် နယ် ဒုက္ခ သည် စ ခန်းမှ ဦးဘရန်ရှောင်ကို မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် တရားရုံးက မတရားအသင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မ
Posted by Gentle Men at 8:55 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်တစ်လျှောက် လမ်းကြောင်းပေါင်း ၄၀ မှ တရားမ၀င် ကားသွင်းမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး တရုတ်နှင့် ထိုင်းနယ်စပ်များမှ အများဆုံး ခိုးသွင်းကာ အစိုးရသစ်လက်ထက် ၂၀၀၇ စီးနှင့်အထက် ဖမ်းမိ
ကြောင်းပေါင်း ၄၀ မှ တရားမ၀င် ကားတင် သွင်း မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း ဇူလိုင် ၂၃ရက်ကကျင်းပသည့်အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း
ဆန်း ၏ ရှင်းလင်းချက်အရ သိရသည်။
ရေးနှစ်မှ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ စီးပွား/ကူးသန်း ၀န်ကြီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာ/အခွန် ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်နယ်သုံးခု၊ တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုတို့မှ ဖမ်းဆီးရမိသည့် လိုင်စင်မဲ့ ကားစီးရေမှာ ၂၀၀၇ စီးနှင့် အထက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
နယ်စပ်မှ တရားမ၀င် ကားတင်သွင်းရာတွင် ကချင်ပြည်နယ်မှ လမ်းကြောင်းငါးခု၊ ကယားပြည် နယ် မှ လမ်းကြောင်းနှစ်ခု၊ ကရင်ပြည်နယ်မှ လမ်းကြောင်း ၁၇ ခု၊ တနင်္သာရီမှ လမ်းကြောင်းလေး
ခေတ်ရဲ့ တိုးတက်မှုတွေနဲ့အပြိုင် ခေတ်ကိုထင်ဟပ်စေမယ့် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကလည်း တစ်မျိုးထက် တစ် မျိုး ဆန်းသစ် လာနေခဲ့ပါပြီ။ ဖက် ရှင်ဒီဇိုင်းတွေ ဘယ်လောက်ဆန်း ဆန်းမြန် မာ ဆန်တဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းကိုသာ နှစ်ခြို က်စွာ ဝတ် ဆင်နေတဲ့ သူကတော့ ဒါရိုက်တာကြည်ဖြူသျှင်ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုး သမီး တစ်ယောက် အနေ နဲ့ မြန်မာဝတ်စုံကို တမြတ်တနိုးဝတ် ဆင်နေတဲ့ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင် ရဲ့ဖက်ရှင် အပေါ် အမြင်က လည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှတဲ့ အတွက် မေးမြန်းဖော်ပြ လိုက်ရပါတယ်။
" ကျွန်မက အရင်တုန်းကဆိုရင် ဘောင်းဘီကို အဓိကဝတ် တဲ့သူ ပါ။ ထဘီဝတ်ရမှာ တအားကြောက်တယ်။ ထဘီဝတ်ရင် စိတ်ထဲ မှာ မလွတ်လပ်သလိုခံ စားရတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ငယ်စဉ်က တည်းက တောက်လျှောက် ဘောင်းဘီကိုပဲ ဝတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုကနေတောက်လျှောက် ထဘီပဲ ဝတ်ဖြစ်လာတာ ၂ နှစ်ကျော်လောက် ရှိသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီကာလ မှာကျွန်မရဲ့ဝန်း
ဗုဒ္ဓဂါယာကို ဗုံးနှင့်တိုက်ခိုက်၍ ကော့စ်ဘဇားတွင် ဘာသာကြီး သုံးရပ်မှ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ၊?????
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ ကော့စ်ဘဇား
ခေါ် ဖလောင်းချိတ် ခရိုင်မြို့တွင်
ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂါယာအား ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက် မူကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်သည့် အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြ သည်။၎င်းဆန္ဒုပြပွဲအားခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ညီညွှတ်ရေး အဖွဲ့မှဦးဆောင် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယမန်နေ့ ( တနင်္ဂနွေ)နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီမှ စတင်ပြီး ကော့စ်
ပင်လယ်ရေအောက်ဖိုင်ဘာကေဘယ် (SEA-ME-WE 3) ဆက်ကြောင်းချို့ယွင်းမှုကိစ္စ ပြည်သူများသို့အသိပေးကြေငြာခြင်း
၁။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ အပြည်ြ ပည် ဆိုင်ရာ ဆက်ကြောင်းများနှင့် အဓိကချိတ် ဆက် ထားသော ပင်လယ်ရေအောက်ဖိုင် ဘာကေဘယ် (SEA-ME-WE 3) ဆက်ကြောင်း သည် (၂၂-၇-၂၀၁၃) ရက်နေ. ညနေ (၀၅:၀၀) နာရီခန်.တွင် ချို.ယွင်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
၂။ ဤဆက်ကြောင်းမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသော အင်တာနက်နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားတယ်လီဖုန်းအဝင်/
Posted by Gentle Men at 8:25 AM No comments:
အာဇာနည် နေ့မှာ ဒေါ်စုတက်ပြီး ပန်းခွေချ
ရှိးခိုးတော့ ဖိနပ်ချွတ်ထားတယ်.. သူတို့
နဲ့တစ်ကွ...တင်ပြီး...ဒေါ်စုကို တော်တယ်တဲ့ ဒေါ်စု က တော်တာတင်မဟုတ်ပဲ...အလွန့်လွန်ယဉ်ကျေး လှတဲ့ မြန်မာ အမျိုး သမီး တစ်ယောက် ဖြစ်
လာအောင် ပြုစု ပျိုးထောင်ခဲ့တာ ဆိုပဲ... ဖိနပ် ကို ဦးလှည့်ပြီး ပြောင်းပြန် ချွတ်ခြင်းပါ တဲ့... တော် ရုံတန်ရုံ ဗမာတွေ မေ့လျော့နေကြတဲ့ နီတိတစ် ခုပေါ့ ဆိုပဲ....
အမှန်တကယ်က ဒေါ်စုရဲ့ကိုယ်ရံတ်ာတစ်ယောက် က... ဖိနပ်ကို လက်နဲ့ ကိုင်ပြီး နောက်ပြန် လှည့် ထားပေးလိုက်တာ... အဲဒါကို မသိပဲ... အားရပါးရ ဂုဏ်တင်နေတာ...
အခုကျွန်တော် တင်တဲ့ ပုံကိုသာ အဲဒီ လို ဂုဏ် တင် တဲ့ အမေ့သား ထမီခြုံတွေ တွေ့ရင် ရှက်လွန်းလို့
Posted by Gentle Men at 8:12 AM No comments:
ကမ္ဘာ့အဆင့်သင်္ချာပြိုင်ပွဲ မြန်မာကျောင်းသားရှစ်ဦး ရွှေတံဆိပ်ဆုရ
အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် SASMO Association မှ ကြီးမှုး ကျင်း ပသော ကမ္ဘာ့အဆင့် သင်္ချာ ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာကျောင်းသား ရှစ် ဦး ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့သည်ဟု ယင်း အစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှပူးပေါင်း ကျင်းပသော T&H သချာင်္သင် တန်းကျောင်းမှ သိရသည်။
ယင်းအစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် SASMO Association နှင့် T&H သင်္ချာသင်တန်းကျောင်းတို့ပူးပေါင်း ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲကို ဧပြီ ၂၃ ရက်တွင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကာ နိုင်ငံအချို့ရှိ ကျောင်းသားများပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သည်။ပါဝင်ရာတွင်
Posted by Gentle Men at 10:46 AM No comments:
ဆိုတေးဇနီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုလာသူ ချိုချိုနဲ့ ပတ်သက်သည့် ဆိုတေး ဖခင်၏ သဘောထား
ဆိုတေးရဲ့ ဇနီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ချိုချိုဟာ သူနဲ့ ဆိုတေးတို့ တရားဝင်ယူထားတာ ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလို့ သတင်းထောက်တွေကို ဇူလိုင် 20 မှာ ရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။ သူမကို အသိ အမှတ် မပြုရင်တော့ တရား ဥပဒေအရ ရင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆိုတေးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ကိုမေးမြန်း ကြည့်တဲ့အခါ..ဦးတို့သိတာက ဆိုတေးနဲ့ တရားဝင်လက်မှတ်ထိုး တာက ဆုံး သွားတဲ့ ကောင်မလေး ၀င့်ကုဋေ သူပါ။ 2012ကတည်းက လက်မှတ်ထိုး လက်ထပ်ထားပါတယ်။ အခု မယားလို့ ပြောတဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့
Posted by Gentle Men at 9:34 AM No comments:
ဘဏ်အချင်းချင်း နိုင်ငံခြားငွေ ရောင်းဝယ်သည့်စနစ် သြဂုတ် ၅ ရက် စမည်
ပုဂ္ဂလိကဘဏ် အချင်းချင်း အမေ ရိ ကန် ဒေါ်လာလွတ်လပ်စွာရောင်း ဝယ်နိုင်သည့်စနစ်(Inter Bank Market) ကို သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့ တွင် စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန် မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် နိုင်ငံခြား သုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန အကြီး တန်း အရာရှိ တစ်ဦးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
မြန်မာ ကျပ်ငွေနှင့် အမေရိ ကန် ဒေါ်လာကို ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များက ၎င်းတို့ နှစ်သက်သည့် ဈေးနှုန်းဖြင့် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ကြမည်ဖြစ်ပြီးဗဟိုဘဏ်ကလည်း နေ့စဉ် ပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် လေလံစနစ်ကိုဆက်လက်
Posted by Gentle Men at 9:24 AM No comments:
အဆိုတော်ဆိုတေး သတိပြန်ရလာတဲ့အချိန် မိမိကို သူ့ဇနီးအဖြစ် လက်မခံဘူး ဆိုရင် ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားများအရ တရားစွဲဆိုသွားမည်
မချိုချိုမှ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းထောက်များကွန်ရက်ရုံးခန်းတွင် ၂၀-၇-၂၀၁၃ နေ့လယ် ၁၁ နာရီတွင် စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ
ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ည ဖိုးချစ် ဇာတ် အဖွဲ့နဲ့အတူ သီချင်းသီဆိုရန် ထွက်ခွာသွားတဲ့ အဆိုတော် ဆိုတေး၊ ဇနီးဖြစ်သူမချောချောနှင့် ယာဉ်မောင်း၊ မိတ်ဆွေအမျိုး သမီး တစ်ဦးတို့ဟာ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန် လမ်းမှာ ကားအက်ဆီး ဒင့်ဖြစ် ပြီး ဇနီးဖြစ်သူ မချောချော ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားသလို အဆိုတော်ဆိုတေးဟာလည်း မန္တလေး ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရဆဲအချိန်မှာပဲအွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေပေါ် မှာ မိမိရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အဆိုတော်ဆိုတေးအား ထိုင်းနိုင်ငံကို ခေါ်ဆောင်ကုသပေးမည်ဟူသည့် သ
Posted by Gentle Men at 9:14 AM No comments: